ADDENDUM BHUKU: Martin Vrijland
MIND & SOUL INOTONGA
Dzidza zvekuita uye zvekuita mune iri kuuya coronavirus kukiya
Akaiswa mukati ADDENDUM BHUKU, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 20 March 2020	• 19 Comments
Amsterdam meya Femke Halsema akataura nezuro kuti kuvharirwa zvachose kweAmsterdam hakuzoshamisi. Musi waKurume 18, De Telegraaf yakataura kuti mapurisa anga achitogadzirira kuvharika kwakazara. Chirevo muTelegraaf nezuro husiku kuti hosha yefuru zvakare yadzoka zvinoita sekutaura kuti dambudziko rave [
Ramba uchiverenga »
Wedzera mubhuku rako rechitatu
Akaiswa mukati ADDENDUM BHUKU, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 14 February 2020	• 11 Comments
Akaiswa mukati ADDENDUM BHUKU, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 12 January 2020	• 8 Comments
Akaiswa mukati ADDENDUM BHUKU, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa16 December 2019	• 13 Comments
Kunobva kupi link link: callmejorgebergoglio.blogspot.com, playground.plus, xandernieuws.net
BATSIRA BATTLE UCHISUNGE PANO
> Ekushanya Kwese: 16.768.413
VISITORI PER 18 FEB 2020
Total Visits: 1.300.361
Corona dambudziko: izvi zvapera rinhi uye chii chatinofanira kuita izvozvi?
Iko 'kudonha kwecabal' isina musoro uye ndivanaani 'Q Anon' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers)?
Germany iri kushanda pa coronavirus app inochengeta track kuti ndiani waunosangana naye
Coronavirus covid-19 kuvharika matanho akawedzerwa Kubvumbi 6 uye inowedzera kuora
Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, kudzika kwakadzika uye internet shutdown musi waApril 1?
Martin Vrijland op Corona dambudziko: izvi zvapera rinhi uye chii chatinofanira kuita izvozvi?
Joris Michels op Kana iyo yakazara coronavirus yekutsvedza inouya uye kuti inoratidzika sei: bvunzo dzekunyora neuto
Mindsupply op Corona dambudziko: izvi zvapera rinhi uye chii chatinofanira kuita izvozvi?
Pinda kero yako ye-e-mail kunyoresa uye kugamuchira e-mail nokukurumidza nechinyorwa chitsva. Iwe unogonawo kuvhara pane bhero rakasvibirira kuti ugamuchire shoko rinosvitsa pafoni yako, i-pad kana kombiyuta.
CHIMWE CHINHU CHAKATATU AVG PROOF
VERENGA MHURI YOKUTAURA PASI
© 2020 Martin Vrijland. Kodzero dzose dzakachengetedzwa. Musoro naSolostream.
Iyi popup ichavhara mukati:
Wakatopedza bhuku rako uye ungada here rumwe ruzivo?
Nokuramba uchishandisa shanduro, unobvumirana nekushandiswa kwekiki. mamwe mashoko
Zvirongwa zvekuki pane webhusaiti ino zvakagadzirirwa 'kubvumira makiki' kuti akupe iwe unyanzvi hwakanakisisa hwekutsvaga. Kana ukaramba uchishandisa webhusaiti iyi usingashandisi maitiro ako ekiki kana iwe ukatora pa "Gamuchira" pasi apa iwe unobvumirana idzi zvirongwa.